Izindaba - Ungakhetha kanjani ukukhanya kokugcwalisa indandatho ukuze usakazwe bukhoma ividiyo yosaziwayo ye-inthanethi?
Ungakhetha kanjani ukukhanya kokugcwalisa indandatho ukuze usakazwe bukhoma ividiyo yosaziwayo ye-inthanethi?
Izibani ezikhalayo ziya ngokuya ziduma emhlabeni wosaziwayo we-inthanethi osakazwa bukhoma. Enkathini yanamuhla yokuqhuma kwenethiwekhi yolwazi, usaziwayo we-inthanethi osakazwa bukhoma ngokuyisisekelo unokukhanya kwendandatho? Manje wonke umuntu ungaqala ukusakaza. Uma nje unesibindi sokubonisa ukuthi uyaziqala ukusakaza, empeleni kulula kakhulu. Yebo, ukusakaza bukhoma kuyinto enhle kakhulu, ngakho-ke ukunaka kanjani ukubukeka kwakho okuhle? Uchungechunge lwamalambu endandatho ahleliwe lubalulekile. Sazise ukuthi yini okufanele siyinake lapho uthenga ilambu leringi.
Eyokuqala: Ukukhetha izinga lokushisa lombala owodwa nokabili?
Lapho uthenga ukukhanya kwendandatho, ukukhetha kokushisa kombala nakho kungenye yezinto ezibalulekile zokucatshangelwa. Izibani zamandandatho zinezinga lokushisa lombala owodwa (okujwayelekile 5600k), iningi lemakethe linomsebenzi wokushisa ombaxambili. Izinga lokushisa lombala lingalungiswa phakathi kuka-3200k-5600k, okwandisa ukuhlukahluka kokukhanya kweringi ngesikhathi sokusetshenziswa. Abasebenzisi bangashintsha kalula phakathi kwamazinga okushisa emibala ehlukene phakathi nenqubo yokuthwebula ngokumane baphendule ifindo ukuze benze imisebenzi eminingi yokudala yezithombe.
Okwesibili: izinzuzo kanye nokubi kokuchithwa kokushisa
Uma uthenga indandatho yesibani esingeziwe, abasebenzisi bavame ukukushaya indiva ukubaluleka kokukhipha ukushisa. Kubalulekile ukwazi ukuthi umsebenzi wokukhipha ukushisa wokukhanya kweringi uhlobene ngokuqondile nesizathu esiyinhloko sempilo yesevisi yesibani esiyiringi. I-Led izokhiqiza ukushisa okuningi lapho isebenza, futhi uma ingashabalali ngesikhathi, izinga lokushisa elishisayo lizonciphisa kakhulu impilo yonke yesevisi yesibani esiyiringi. Kuyini ukusebenza okuhle kokukhipha ukushisa?I-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya-Ukukhanya kokugcwalisa indandatho ye-LED enemibala emibili kwenze umsebenzi omuhle kakhulu kulokhu. Impahla ye-ABS enokukhishwa okuhle kokushisa isetshenziswa njengegobolondo, futhi ingemuva lendandatho yokukhanya iklanywe ngezimbobo eziningi zokupholisa.
Ezintathu: Ubuhlalu besibani se-LED ubuningi namandla
Uma likhulu inani lama-LED, ukukhanya namandla amakhulu. ThathaI-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya-Indandatho ye-LED enemibala emibili yesikhumba egcwalisa ukukhanya njengesibonelo. Lokhu kukhanya kusebenzisa izinhlayiya ezingenakubalwa zokukhanya okuphezulu kwe-LED, futhi amandla afinyelela? ? W, ukukhanya okukhanyayo? ? LM, okulingana izikhathi eziningana ukukhanya okukhanyayo kwezibani ze-tungsten filament zendabuko. Ngakho-ke, lapho uthenga ukukhanya kwendandatho, kufanele unake inombolo yangempela namandla e-LED.
Okwesine: izinkinga zokuhambisana
Izibani ezikhalayo zazalelwa endaweni lapho ukusakazwa bukhoma kosaziwayo be-inthanethi kukhona yonke indawo. Ihlangabezana nezidingo ezihlukene zokuthwebula ngaphansi kwezidingo eziningi, futhi izinsiza ezihlukene zezithombe zingasetshenziswa kule nqubo. Ingakwazi ukusekela izesekeli ezihlukahlukene, kuncike ekuklanyweni kokukhanya kwendandatho. Ngokwesibonelo, iI-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya-I-LED ebandayo futhi efudumele yokugcwalisa indandatho yokugcwalisa indandatho yokukhanya iklanywe ngesikulufu sokunwetshwa kwendawo yonke, esihambisana nezinsiza ezifana nezibuko eziyize ezingaguquki, omakhalekhukhwini, namakhamera e-SLR.
Eyesihlanu: inkinga yenkomba yokunikeza umbala
Inkomba yokunikeza umbala (CRI) ibhekisela emibalabala ehlukene eboniswa imithombo yokukhanya ehlukene entweni yombala ofanayo. Uma inkomba yokunikeza umbala iphezulu, kulapho umbala okhiqizwayo uphezulu khona.I-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya-I-LED enokukhanya okuphezulu eyamukelwe ukukhanya kwe-LED okubandayo nokufudumala kwemibala emibili egcwalisa indandatho inokukhanya okuphezulu kanye ne-CRI ≥ 92, eseduze nokubuyiselwa okuphelele kombala weqiniso.
Isithupha: Ukulungiswa kokuqina kokukhanya okungapheli
Ukukhanya kwendandatho yakhelwe ngeknobhu yokufiphala engenazinyathelo, esebenziseka kalula futhi yenza ukukhanya kube enembile futhi kunembe. Isibonelo, inkinobho yokufiphalisa engenasinyathelo yeI-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya-I-LED ebandayo nefudumele enombala ombaxambili wokugcwalisa indandatho yokukhanya ingalungiswa ngamazinga ahlukene okukhanya nezinga lokushisa lombala ngokuyijika kancane.
Lungisa ukukhanya kanye nezinga lokushisa lombala kalula ngenkinobho yokufiphalisa engenasinyathelo.
Isikhombisa: Umkhiqizi onamandla
Kunezinhlobo eziningi zezibani zamandandatho emakethe. Phakathi kwazo, izinga nokusebenza azilingani. Kunconywa ukuthi ukhethe abakhiqizi bemikhiqizo emikhulu lapho uthenga izibani zamandandatho.I-Teyeleec ring gcwalisa ukukhanya ingenye yemikhiqizo ebalulekile enesipiliyoni seminyaka eminingi ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemishini yezithombe echwepheshile. Amalambu amaringi akhiqizwa wonke athandwa abathwebuli bezithombe abanekhwalithi ephezulu, ukusebenza kwezindleko eziphezulu kanye nesevisi ecabangelayo yangemva kokuthengisa. Dumisa, i-AFI iyisiqinisekiso sakho sokuzethemba nokuthula kwengqondo.
Isikhathi sokuthumela: Dec-10-2021 EMUVA
Gcwalisa Ukukhanya, Iphaneli Led Rectangular, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Iphaneli ye-Rgb Led, Abahlinzeki beLamp Dimmable, Light Panel Suppliers,